Isilaama - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 14:09 15 Onkololeessa 202114:09 15 Onkololeessa 2021
Apple Chaayinaatti appii Qur'aanaa beekamaa haqe
Appii Quraanaa beekamaa addunyaa Chaayinaa keessattii gaaffii qondaalota biyyattiin akka faayidaarra hin oolle gochuu Apple hime.
...tti maxxanfame 4:19 15 Fuulbaana 20214:19 15 Fuulbaana 2021
Biyyoonni gara garaa baay'een seerawwan Islamaatiin bulu, garuu muuxannoo Shari'aa jala jiraachuu bakka jiraaturratti hundaa'uun garaa garummaa qabu. Dubartoonni shan biyya jiraatanirraa isaaniif maal akka fakkaatu BBCtti himaniiru.
...tti maxxanfame 4:02 21 Waxabajjii 20214:02 21 Waxabajjii 2021
Iraan haala sirna addaa biyyattiin ittiin bultuutiin amma pirezidaantii haaraa argatteette jirti. Sirni siyaasaa Iraan waxaxaafi adda yoo ta’u, qabiyyee barsiisa Islaamummaa jabanaafi dimokiraasii of keessatti hammate qaba.
...tti maxxanfame 4:19 8 Waxabajjii 20214:19 8 Waxabajjii 2021
Imaammatni to'annoo dahumsaa Chaayinaa 'dhala uummata Uyghur hir'isa'
Chaayinaan biyyoota Lixaan Kutaa biyyaa Xinjiang keessatti duguuggaa sanyii raawwachuun himatamaa turte. Kun kan ta'e gariin humnaan lakkoofsa hamma ijoollee godhatanii murteessuuni.
...tti maxxanfame 9:11 13 Caamsaa 20219:11 13 Caamsaa 2021
Ayyaanni Iid al-Faxir waggaa 1442ffaan guutuu addunyaatti sirnoota garaagaraan kabajamaa jira.
...tti maxxanfame 9:50 10 Caamsaa 20219:50 10 Caamsaa 2021
Kantiibaa Ittaantuun Magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee taatee guyyaa Dilbataa Addabaabaayii Masqalaatti uumameef ''maqaa ofiifi bulchiinsa magaalichaan dhiifama gaafadha,'' jedhan.
...tti maxxanfame 8:09 18 Ebla 20218:09 18 Ebla 2021
Seerri amantii Islaamaa hordoftoonni amantichaa ji'a Ramadaanaa keessa ganama obboroo irraa eegalanii hanga galgalaatti waan bifa soorataan gara qaamaa seenu kamiyyuu ni dhorka. Haata'u malee talaalliin qabiyyee soorataa fi dhugaatii homaatuu waan of keessaa hin qabneef namoonni fudhachuu qabu jedhu beektonni amantichaa.
...tti maxxanfame 4:33 13 Ebla 20214:33 13 Ebla 2021
Ramadaan Mubaarak! Ramadaan Kariim (Ji’a eebbifamaafi kan arjummaa isaaniif haa ta’u) jechuun Musliimonni jalqaba ji’a Ramadaanaa simatu.
...tti maxxanfame 13:25 8 Bitooteessa 202113:25 8 Bitooteessa 2021
Murtee ummataa biyya Siwiizerlaanditti gaggeeffameen burkaa fi Nnkaaba dubartoonni Muslimaa godhatan dabalatee aguuggii fuulaa godhachuun dhorkame.
...tti maxxanfame 4:28 2 Bitooteessa 20214:28 2 Bitooteessa 2021
Gareen beektota Islaamaa Afriikaa Kibbaa, ergama nageenya eegsisuu fudhatanii, kutaalee biyyattii garee qindaa'anii haleellaa raawwatanii fi qoricha sammuu hodoochu daldalaniin dararamaa jiran keessatti du'aayii gochaa barnoota kennaa jiru.